ညွန့်ပေါင်းနှင့် မိမိတို့နိုင်ငံ၏ ယနေ့အခင်း အကျင်း - Yangon Nation News
ညွန့်ပေါင်းနှင့် မိမိတို့နိုင်ငံ၏ ယနေ့အခင်း အကျင်း
နိုင်ငံတော်သမ္မတနှင့်… နိုင်ငံတော်၏အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်(ပြည်ထောင်စုဝန် ကြီး နိုင်င်ငံခြားရေးဝန် ကြီးဌာန) ၊အပါအဝင် အခြားပြည်ထောင်စုဝန် ကြီးများ၊
ပြည်ထောင်စုရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်က ရွေးကောက်ပွဲကျင်းပရန်ကြေညာသည်ံရက်မှစတင်၍ ရွေးကောက်ပွဲဆိုင်ရာ ပါတီစည်းရုံးရေးလုပ်ငန်းများကိုလည်းကောင်း၊ နယ်မြေစည်းရုံးရေးလုပ်ငန်းများကိုလည်းကောင်း၊ဆောင်ရွက်ခွင့်ရှိပါတယ်၊
ပြည်ထောင်စုအစိုးရအဖွဲ့ ဥပဒေ…..ပုဒ်မ(၇)/(ခ) နှင့် ပုဒ်မ(၁၇)/(ဃ)… တွင်အတိအလင်း ပြဌာန်းထားပါတယ်၊
အခန်း(၂)…..ဖွဲ့စည်းခြင်းနှင့် ခန့်အပ်တာဝန်ပေးခြင်း —–
(က) ပြည်ထောင်စုအစိုးရအဖွဲ့ကို အောက်ပါ
ပုဒ်မ(၆)ပုဒ်မခွဲ(က) ပါ ပြည်ထောင်စုအစိုးရအဖွဲ့ အဖွဲ့ဝင်တစ်ဦးဦးသည် —
နိုင်ငံရေးပါတီ တစ်ခုခု၏ အဖွဲ့ဝင်သော်လည်းကောင်း၊
ပုဒ်မ(၆၃)၊ပုဒ်မ(၆၄)၊ပုဒ်မ(၂၃၂)/ပုဒ်မခွဲ(စျ) (ည)၊(ဋ) နှင့် ပုဒ်မ(၂၃၇)၊ ပုဒ်မခွဲ (စ)၊(ဆ)၊(ဇ) တို့ပါ ပြဌာန်းချက်များအတိုင်းဆောင်ရွက်ရမည်။
(ခ) ပုဒ်မခွဲ(က) အရ ဆောင်ရွက်ရာတွင်…
နောင်လာမည့် အထွေထွေရွေးကောက်ပွဲတစ်ရပ်ရပ်တွင် ပါဝင်ရွေးချယ်ခံမည့်သူဖြစ်ပါက
ပုဒ်မ(၃၈)၊ ပုဒ်မခွဲ(က) အရ ပေးအပ်ထားသော ရွေးကောက်တင်မြှောက်ခံပိုင်ခွင့် မဆုံးရူံး စေရန်အလို့ငှာ ရွေးကောက်ပွဲကျင်းပရန် ပြည်ထောင်စုရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်က
တိဲုပါ ပြဌာန်းချက်များနှင့် ကိုက်ညီလျှင်
ဒုတိယဝန်ကြီးများသည် ပုဒ်မခွဲ(ဂ) အရ
ဆောင်ရွက်ရာတွင် နိုင်ငံရေးပါတီ တစ်ခုခု၏ အဖွဲ့ဝင်ဖြစ်လျှင်သော်လည်းကောင်း၊တစ်သီးပုဂ္ဂလ အရွေးချယ်ခံခဲ့ရသူဖြစ်လျှင်သော်လည်းကောင်း၊
အဆိုပါ ပုဂ္ဂိုလ်သည် နောင်လာမည့်
အထွေထွေရွေးကောက်ပွဲတစ်ရပ်ရပ်တွင် ပါဝင်ရွေးချယ်ခံမည့်သူဖြစ်ပါက နိုင်ငံသားတစ်ဦးအား ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေပုဒ်မ(၃၈)/ပုဒ်မခွဲ(က) အရ ပေးအပ်ထားသော ရွေးကောက်တင်မြှောက်ခံပိုင်ခွင့်
မဆုံးရူံးစေရန် အလို့ငှာ ရွေးကောက်ပွဲကျင်းပရန် ပြည်ထောင်စုရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်က
ကြေညာသည့်နေ့မှစ၍ ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေ ပုဒ်မ(၁၂၀) နှင့် (၁၂၁) တို့ပါ ပြဌာန်းချက်များနှင့်ကိုက်ညီလျှင် ရွေးကောက်ပွဲဆိုင်ရာ ပါတီစည်းရုံးရေးလုပ်ငန်းများကိုလည်းကောင်း၊ နယ်မြေစည်းရုံးရေးလုပ်ငန်းများကိုလည်းကောင်း၊ ဆောင်ရွက်ခွင့်ရှိသည်။
ဥပဒေ နှင့် အညီ ရွေးကောက်တင်မြှောက်ခွင့်နှင့် ရွေးကောက်တင်မြှောက်ခံပိုင်ခွင့်
ပုဒ်မ(၁၂၀) သည်လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်များ၏ အရည်အချင်း အားပြဌာန်းထားပါတယ်၊
ပုဒ်မခွဲ(က)/(ခ)/(ဂ)/(ဃ) များဖြင့် သတ်မှတ်ချက်များကို ဖွင့်ဆိုပြဌာန်းထားပြီး၊
ပုဒ်မ(၁၂၁) သည် လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်အဖြစ် ရွေးကောက်တင်မြှောက်ခံပိုင်ခွင့် မရှိခြင်းအား ပြဌာန်းထားပါတယ်။
ပုဒ်မခွဲ (က)/(ခ)/(ဂ)/(ဃ)/(င)/(စ)/(ဆ)/(ဇ)/(စျ)/(ည)/(ဋ)/(ဌ) များဖြင့်သတ်မှတ်ဖွင့်ဆိုပြဌာန်းထားပါတယ်။
ယခင် ဦးသိန်းစိန် သည် နိုင်ငံတော်သမ္မတ တာဝန် ထမ်းဆောင်ခဲ့စဉ်မှာလည်း…..
ပုဒ်မ(၇)ပုဒ်မခွဲ(ခ) နှင့် ပုဒ်မ(၁၇) ပုဒ်မခွဲ(ဃ) အရ (၂၀၁၅) အထွေထွေရွေးကောက်ပွဲတွင် မဲဆွယ်စည်းရုံးသွားပါတယ်၊
သို့ပေမယ်လို့ ဦးသိန်းစိန် သည်ထိုစဉ်က ပါတီစည်းရုံးရေးလုပ်ငန်းများနှင့် နယ်မြေ စည်းရုံးရေးလုပ်ငန်းများကို ဆောင်ရွက်ခဲ့မူများသည် ဥပဒေနှင့် မညီခဲ့ပါပေ၊
(၂၀၁၅) အထွေထွေရွေးကောက်ပွဲတွင် လွတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်အဖြစ် ဝင်ရောက်
အဆိုပြု ရွေးချယ်ခံခြင်း လုံးဝမရှိခဲ့ပါသော ကြောင့် ပြည်ထောင်စုအစိုးရအဖွဲ့၏ သတ်မှတ်ပြဌာန်းထားသော
တည်ဆဲ ဥပဒေပုဒ်မ(၇)/(ခ) နှင့် မညီခဲ့ပါပေ။
ထို့ပြင် အထွေထွေရွေးကောက်ပွဲနှင့်သက်ဆိုင်သော ပြည်ထောင်စုအစိုးရအဖွဲ့ဝင်များဖြစ်သည့် သမ္မတ၊ဒုတိယသမ္မတများနှင့် ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးများ၊ပြည်ထောင်စုရှေ့နေချုပ်၊ ဒုတိယဝန်ကြီးများ ၏ နိုင်ငံသားတစ်ဦး၏အခွင့်အရေးဖြစ်သည်ံ့ ပြဌာန်းထားသော…..
ဥပဒေများ ကို ၎င်းတို့၏ မိခင်ပါတီမှ နိုင်ငံနှင့် နိုင်ငံသားပြည်သူများ အား ဖွင့်ဟ ထုတ်ပြန် ပေးခဲ့ခြင်း ရှိသည်ကို မတွေ့ရပေ။
(၂၀၁၅) အထွေထွေရွေးကောက်ပွဲတွင် ပြည်သူလူထုအများမှ ဆန္ဒမဲပေးရွေးချယ်မူ ဖြင့် အနိုင်ရလာကာ ရွေးချယ်ခံအရပ်သားအစိုးရခေတ်ကာလသို့ရောက်မှ ပြည်သူ ပြည်သာအားလုံး သိစေ မြင်စေ ကြားစေ
နိုင်ကြပါစေရန် အစိုးရအဖွဲ့၏ မိခင်ပါတီ ကပြည်သူ ပြည်သားများထံသို့…
ထုတ်ပြန်ကြေညာ ပေးနိုင်သည့် ပွင့်လင်း မြင်သာမူများကို တွေ့ရပါတယ်။
(၂၀၂၀) အထွေထွေရွေးကောက်ပွဲတွင်ဝင်ရောက်ယှဉ်ပြိုင်အရွေးအချယ်ခံ ကြမည့် နိုင်ငံရေးပါတီများသည် အနည်းဆုံးတော့ ရွေးကောက်ပွဲနှင်ဲ သက်ဆိုင်သော အရေ​ကြီးသည့် ဥပဒေ ပြဌာန်းထားမူများကို လေ့လာ မှတ်သားထားကြဘို့တော့လိုအပ်ပါတယ်။
တစ်ဖက်ကိုဆော်ရရင်ပြီးရော ဆိုတဲ့ စိတ်နေ စိတ်ထား အပြော အဆို အရေးသားများကို သတိထားကြစေလိုပါတယ်။
တစ်ဖက်၏ အမှားကိုထောက်ပြ ရေးသားမည်ဆိုလျှင် အချက်အလက်၊ ဥပဒေပြဌာန်းထားမူများ ရှိ .. မရှိ ကို ရှာဖွေ လေ့လာပြီးမှသာအချက်အလက်နဲ့ ထောက်ပြ ပြောဆို ရေးသားကြပါက ပိုပြီး လူကြီးဆန်ကာ…
ပြည်သူအများမှ ပို၍ ပို၍ လေးစား အလေးထား ယုံကြည် ထောက်ခံလာကြမှာ…..
နိုင်ငံ့အကျိုး နှင့်ပါတီအကျိုး၊ပုဂ္ဂိုလ်အကျိုး ယှဉ်လာပါက နိုင်ငံ၏ အကျိုးကိုသာအဓိကထား၍ ပြုလုပ်ရပေမည် မဟုတ်ပါလား ?
သို့ကြောင့် ပင် နိုင်ငံရေးပါတီတို့သည်
ပြည်သူ လူထု၏ ယုံကြည် အားပေးထောက်ခံမူများ ကြီးမား ကျယ်ပြန့် နိုင်စေရန်သည် အလွန်ပင် အရေးပါ လိုအပ်လှပါတယ်။
အကျိုး အကြောင်း စီလျော် ညီညွတ်စွာ တင့်တင့် တည်တည် ခိုင်ခိုင် ခန့်ခန့် သိမြင် ဖတ်မှတ် ပြောဆို ရေးသားခြင်းသည်များ ကသာ ပြည်သူ လူထု ၏ ကောင်းမွန် သော အားပေး ထောက်ခံ ယုံကြည်မူများဖြစ်တည်လာစေ မှာ မဟုတ်ကြပါလား ?
သို့ဖြစ်ပါသောကြောင့် ယခုအချိန် ကာလမှာ
မိမိတို့နိုင်ငံတွင် ညွန့်ပေါင်း အစိုးရ တစ်ရပ် ပေါ်သင့် သို့မဟုတ် ဖြစ်ပေါ်လာမူ မရှိသင့်
ကို ဆန္ဒမဲများပေးပိုင်ခွင့် အပြည့်ရှိနေကြသောပြည်သူ ပြည်သားများမှ တတ်နိုင်သမျှ လေ့လာ ကြကာ မိမိတို့ တစ်ဦးခြင်း၏ အခွင့် အာဏာများ အား ပြည့်ပြည့် ဝဝ အသုံးပြု ကြစေရန် တိုက်တွန်းလိုက်ပါတယ်။
အကယ်၍ များ ပါတီတစ်ခုတည်းက အစိုးရမဖွဲ့နိုင်ပါဘဲ ညွန့်ပေါင်းအစိုးရမျိုး ဖြစ်လာလျှင်…
ထိုအစိုးရသည် မိမိတို့နိုင်ငံ၏ ခေတ်အဆက်ဆက် အတွေ့ အကြုံနှင့် မိမိတို့နိုင်ငံ၏စရိုက် လက္ခာဏာအရ နိုင်ငံနှင့် နိုင်ငံသားများအကျိုးချမ်းသာမူများအတွက်အလုပ် မလုပ်ရ တော့ပါဘဲ…
နိုင်ငံရေး သင်္ကာရှင်း ပွဲများ ဖြင့်သာ အချိန်တွေကုန်လာခြင်းဖြင့်သာ ရပ်တည်သွားရပါလိမ့်မယ်။
အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော် လွတ်လပ်ရေးမရခင်တိုင်းပြု ပြည်ပြု ရွေးကောက်ပွဲတွင်
ပြည်သူ လူထု ကတစ်ခဲနက်ထောက်ခံ အားပေးသည့် ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်း ဦးဆောင်သည့် ဖဆပလ က အနိုင်ရလာခဲ့ ပြီး လွတ်လပ်ရေးအတွက် ပိုပြီးညီညွတ်လာစေရန်နဲ့ ပြည်သူအများ အားတက်လာစေဖို့
ဖဆပလ အဖွဲချုပ်တွင်လည်းကောင်း ၊ အစိုးရအဖွဲ့တွင်လည်းကောင်း ၊ကွန်မြူနစ်ပါတီနှင့် ဖဆပလအဖွဲ့ချုပ်တို့ဟာ ညီညွတ်ရေးဖော်ဆောင်ကြကာ အတူတကွ ပူးပေါင်း ပါဝင် ဖွဲ့စည်းခဲ့ ကြတာကို ဖတ်မှတ်သိလာခဲ့ရပါတယ်၊
သို့ရာတွင် နိုင်ငံအတွက် အားတွေ ဖြစ်မလာပဘဲအချင်း ချင်း တိုက်က်ကြ ခိုက်ကြထိုးနှက်ကြ ရင်းနဲ့သာ အချိန်တွေ အလဟသကုန်ဆုံးခဲ့ရပြီး လွတ်လပ်ရေးသာ ရလာပါတယ်၊
မိမိတို့နိုင်ငံမှာ ဖြစ်လာ ခဲ့ကြတဲ့ နိုင်ငံရေး ပြသနာ တွေဟာ တစ်စစီ ဖြစ်လာခဲ့ ပြီးအစိတ်စိတ် အမွှာမွှာကွဲပြဲလာကာ ယနေ့ထက်ထိပြန်ကောက်ယူလို့မရသေးတဲ့ အပြင် ထိုအကွဲအပြဲ များ၏ ဒဏ်တွေပိနေပြီး ခုထက်ထိတိုင် မိမိတိဲုနိုင်ငံက အဲဒီဝန်ကို ထမ်းပိုးသယ်ဆောင်နေရဆဲပါ။
ဤကဲ့သို့ မျိုးကို မိမိတို့နိုင်ငံသားများက ဆက် သယ်ဆောင်ခြင်မူများမရှိတော့ပေ။
မိမိအပါအဝင် ပြည်သူ အများစု၏ ဆန္ဒသည်
ရွေးကောက်ပွဲမှ တက်လာသော ရွေးချယ်ခံအစိုးရ အားကောင်းပြီး တိုင်းပြည်အတွက်ကောင်းကျိုးကို အသုံးချနိုင်သည့် အာဏာ လုံးဝရှိစေရမည်၊
ထိုမှ ခေတ်ကာလကောင်းများကို ဖြစ်တည်…
ဖြတ်ကျော်လာကာ နိုင်ငံရေးစနစ်ကောင်းများ ပေါ်ထွန်းလာ၍ အထိုင်ကျလာသည့်အခါ အားလုံးက နိုင်ငံရေးနဲ့ နိုင်ငံ့အရေးများကိုသိမြင် နိုးကြား လာသည့်အခါမှသာ
အထွေထွေရွေးကောက်ပွဲအနိုင်ရပါတီမှ အစိုးရမဖွဲ့နိုင်မှသာ ညွန့်ပေါင်းဖွဲ့မျိုးဖွဲ့ စည်း ပါက ပိုမို သက်ရောက်မူအား ကောင်းနိုင်ပါလိမ့်မယ်၊
နောင်အခါတွင် သမ္မတကို လူထုမှ တိုက်ရိုက် ရွေးချယ် သည့် နိုင်ငံရေးစနစ်ဆီသို့လည်းရောက်လာနိုင်ကာ သမ္မတက အစိုးရဖွဲ့နိုင်သည့် စံနစ်နှင့် ပြည်နယ်၊တိုင်းဒေသ အုပ်ချုပ်ရေးမှူးများသည်လည်းလူထုကတိုက်ရိုက်မဲပေးသည့်စနစ်များသည်လည်း ဖြစ်လာနိုင်ပါတယ်၊
ပါတီစုံဒီမိုကရေစီ စနစ် ကိုသွားနေပါပြီ။
သို့ဖြစ်ပါ၍ အထက်ပါ ၌ စာရေးသူ၏
မိမိတို့နိုင်ငံတွင် ကောင်းမွန် ဖွံ့ ဖြိုး စေမည့် နိုင်ငံရေးစနစ်များ အခြေတည် လာစေရန်…
ရွေးချယ်ခံအစိုးရဖွဲ့နိုင်သော အင်အားရှိပြီး ၊
နိုင်ငံတော်နှင့် နိုင်ငံသားများအပေါ် မည်သည့်ခေါင်းဆောင်က ပိုမိုစေတနာ ထား လုပ်ဆောင်နိုင်ပါသလဲ ဆိုတာကို မိဘ ပြည်သူ ပြည်သား များမှ ခွဲခြမ်း စိတ်ဖြာ…..
စဉ်းစား ဆုံးဖြတ် စေနိုင်ကြပါစေ ကြောင်း…
ရေးသား နိူးဆော် လိုက်ရပါတယ်။
အလေးထားစွာဖြင့်. ကိုသိန်းဌေး ၈၈ ပဲခူး၊
မဲဆွယ်စည်းရုံးရာတွင် ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်း ဓာတ်ပုံ အသုံးပြုမည်ဖြစ်ကြောင်း ဒေါက်တာဇော်မြင့်မောင် ပြောကြား
ကိုဗစ်-၁၉ ပြင်ဆင်၊ ကုသ ဆောင်ရွက်ချက် ခြောက်လပြည့်